Shekh shariif “Prof Gaandhi waxaan is barannay 2006 xilligaas oo uu ka shaqeynayay dhex-dhexaadinta Dowladdii KMG ahayd | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Shekh shariif “Prof Gaandhi waxaan is barannay 2006 xilligaas oo uu ka...
Madaxweynihii hore ee somaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa sacsi u diray wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladdii ku-meel gaarka aheyd ee uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed.
Madaxweynihii Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, oo ay soo wada shaqeeyeen Gaandhi ayaa ka tacsiyeeyey geeridiiisa. “Waxaan shacbiga Soomaaliyeed la wadaagayaa murugada iyo geerida Prof Maxamed Cabdi Gaandhi oo ay isoo gaartay inuu ku geeriyoodey dalka Faransiiska,” ayuu yiri.
“Prof Gaandhi waxaan is barannay 2006 xilligaas oo uu ka shaqeynayay dhex-dhexaadinta Dowladdii KMG ahayd ee Madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf AUN iyo Midowga Maxaakiimta. Wuxuu kamid noqdey isbahaysigii dib u xoreynta ee Asmara, isagoo Dowladdii aan Madaxweynaha ka ahaana kasoo noqdey Wasiir.”
“Prof hadda wuxuu kamid ahaa Madasha Xisbiyada Qaran oo uu guddoomiye ku-xigeen ka ahaa, iyo Midowga Musharaxiinta wuxuu ahaa odey Soomaaliyeed oo dalkiisa usoo shaqeeyey, wuxuu ahaa aqoonyahan Soomaaliyeed, isagoo sidoo kalena qayb ka ahaa dhismihii dowlad goboleedka Jubaland.”
Sidoo kale Waxa u mudod dheer ku noolaa dalka Faransiiska. Waxa uu ahaa 72 sano jir marka uu geeriyooday.
Previous articleWasiir Fiqi “Halgamayaasha Shiirkoole waxaa ka raalli gelinayaa xildhibaanada walaalaha ah ee hiilkii ay u baahnaayeen markii ciidamadu dul fadhiyeen ka gaabiyey, ee aan haddana intaas ku ekaan
Next articleRa iisal wasareahii hore Xasan Cali Kheyre oo ka Tacsiyeeyey Geerida Gandi
6,000 oo muhaajiriin ah oo gaaray dhulka ay Spain maamusho...
Ugu yaraan 6,000 oo muhaajiriin ah ayaa gaaray dhulka ay Spain maamusho ee Ceuta, kuwaasi oo ka yimid dalka ay deriska yihiin ee Morocco,...
Khadka tareenka isku xira Itoobiya iyo Jabuuti oo la xiray.
Danjirihii hore ee Soomaaliya ee Washington oo ku geeriyooday Mareykanka
Guddoomiyaha Magaalada Mandheera oo sheegay in Weerarada Al-Shabaab ay kor...
Guddoomiyaha Baarlamaanka Carabta oo soo dhaweeyay go’aankii Golaha Wadatashiga Qaranka ee...
Kooxa ku Hubeysan Bistoolada oo 3 Askari ku qaarajiyey magaalada...
Ugu yaraan 8 qof oo ku dhimatay weerar culus oo...
Mohamed Abdullahi Mohamed - August 4, 2021 0